Yonke intengiso ye-imeyile ethi iiSizzles ayisiSpam | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 24, 2013 NgoMvulo, Novemba 22, 2021 Douglas Karr
Le infographic evela Izinto zokuhamba, i Isisombululo sephepha lokufika, Inika ukuqonda okukhulu kwintengiso ye-imeyile kunye neenkcukacha ze-SPAM. Isitshixo sale infographic kukuba zingaphi ii-imeyile ezisemthethweni ziyagqitywa kwifolda ye-junk. Amathuba kulapho uninzi lwakho lukhona, nalo.
I-imeyile esekwe kwimvume iyaqhubeka ukukhokela ipakethi ngokuchofoza okungaphaya kunye namaxabiso okuguqula. Amashishini amaninzi abeka yonke imigudu yawo kwizicwangciso zokufumana ukuqhuba ukugcwala kwabantu ngakumbi ukuba bayazilibala iindlela zokubamba iindwendwe ngenene wenza yenze kwisiza. Yongeza ifom yobhaliso ukuze ubambe ezo ndwendwe zinomdla, kwaye utyhale imiyalezo kuzo xa ithuba livela.
Kwaye xa uyila kwaye uthumela ezo imeyile, sebenzisa ezona ndlela zilungileyo:
Singamalungu e Izinto zokuhamba kwaye likhonkco lethu kule post!
tags: emailemail Marketingimeyile engafunekiyojunk ifoldaispemu
Isikhokelo seeholide kuThengiso lweSelfowuni
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2013 ngo-10: 10 AM
Douglas, inqaku elinomdla. Ngokuba nomxholo ochanekileyo, umgca weSifundo esiLungileyo kunye neSibizo esicacileyo sokuSebenza singenza umehluko. I-imeyile iya kuhlala iyeyona ndlela iphantsi yentengiso.
I-NetGains Technologies Pvt Ltd